Maxaad ka Ogtahay Halista ay Dhallinyaradeennu ka Badbaadday 30-kii Sanno ee aynu ku JirnaySoomaaliya? | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Maxaad ka Ogtahay Halista ay Dhallinyaradeennu ka Badbaadday 30-kii Sanno ee aynu...
Maxaad ka Ogtahay Halista ay Dhallinyaradeennu ka Badbaadday 30-kii Sanno ee aynu ku JirnaySoomaaliya?
Faallo: Suxufi Xuseen Cali Nuur
Xannuunka Covid–19 oo si wayn ugu faafaya dalalkadunida, gaar ahaan dalalka horumaray qaar ka mid ah iyo kuwa Koonfurta Ameerika, waxa dadka u dhintaydalka Maraykanka gudihiisa ay u badan yihiin dad madow. Qaddarku waa halkiisa oo lama diidi karo.Hase ahaatee waxa soo if baxay dilkii foosha xumaa eeGeoge Floyd oo ahaa nin madow oo Maraykan ah oocaadi ah, ayaa dahaadhka ka qaaday in sababaha uguwayn ee ay dhimashadu ugu badan tahay dadka madoway ka dhalatay istaraatiijiyad hore ee hab dhaqankaxag–jirka oo wali haysa.
Soomaaliya isla dhaqan noocan ah ayey u adeegsataydhallinyarada reer Somaliland intii ka dambaysay is-raac–ku–sheegii labada dal ee sannadkii 1960. Dad badan oo labada dalba ku nooli, waxay u qaadankaraan inay fikraddani tahay dacaayad, hase ahaateewaa xaqiiq jirtay oo aan muuqan, hase ahaatee aanmarnaba la dafiri karayn; maadaama dhaqan galkeeduahaa mid muuqda.
Si loo fahmo aan dib u raacno taariikhda dalkeenaSomaliland oo 26 June 1960 ka hor inta aannu ka xoroobin gumaysigii Ingiriiska, waxa ku yaalay labadugsi oo sare – waa Cammuud iyo Sheekh. Waxa sooraacayey dugsiga farsamada VTC, dugsiga tababarkamacalliinta TTC iyo dugsiga tababarka maamulkaCTC. 30 sanno oo is-raac ah kadib markaan halganxornimadeena kagala soo noqonay, labadii dugsi eesare ee xiligaas jiray, waxa ku soo biiray hal dugsi oosare oo Hargeysa ku yaalla iyo dugsiga farsamada eemagaalada Burco.
Maanta tirada dugsiyada sare ee dalka JamhuuriyaddaSomaliland waa xad-dhaaf, Jaamacaduhunagobollabada Jamhuuriyadda Somaliland oo idilmagaalo madaxyadooda way ka wada furan yihiin.Su’aasha meesha ku jirtaa waxay tahay ma awooddhaqaale iyo maamul ayay Xukuumadihii Soomaaliya30 sannadood oo Jamhuuriyadaha Soomaaliya iyoJamhuuriyaddii Dimuqraadiga ee Soomaaliya ay xukumayeen u waayeen inay kordhiyaan ugu yaraandugsiyada sare ee dhinacii Somaliland ku yaallay, misehadaf iyo u jeeddo istaraatiijiyadaysan oo ka qoto-dheer ayay ka lahaayeen?
Bilowgii toddobaatanaadkii (1970s) ee qarnigii hore, waxa socdaal ku yimid gobollada dalkeena, WasiirkiiWaxbarashada Soomaaliya ee xiligaas. Wuxuu soomaray labada dugsi ee sare iyo dugsiyada kale ee dalkaku yaallay, waxaannu la yaabay nidaamka waxbarashoee ka jiray. Noqoshadiisii ka bacdina waxa soo if baxaywax lagu tilmaamay inuu nidaam cusub oo lagumidaynayo labadii dal ee is-raacay waxbarashadoodii.
Nidaamkan waxa macallimiintii Somaliland joogtayloo beddelay Soomaaliya. Muddo yar ka bacdinadugsigii waxbarashada macallimiinta ee Somaliland kuyaallay waxa lagu beddelay mid cusub oo laga dhisaymagaalada Afgooye agteeda oo la odhan jiray NTEC, waana kulliyadda qudha ee Af Ingiriisi wax lagubaranayey, iyadoo dhammaan kuliyadaha kale eeJaamacaddii Soomaaliya luqadda wax lagu bartaaahayd Soomaali.
Dugsigii maamulka ee Somaliland waxa beddelaydugsiga SIDAM ee magaalada Muqdisho lagasameeyey. Dugsigii farsamadana ayaa albaabada looxidhay. Ardaydii dugsiyada sare ka baxaysay ootiradoodu kordhaysay, waxay qasab ku noqotay inayMuqdisho u tagaan, si ay waxbarashadooda u wataan, waxaana fursadda waxbarasho ee Xamar suurtogal u ahayd oo kaliya cidda qoyskoodu dhaqaale wanaagsanlahayd ama ehel iyo qaraabo u joogeen.
Soomaaliya dhaqankani muu ahayn mid duruufonabadgalyo ama dhaqaale ka hor joogeen in Somaliland tirada dugsiyadooda la kordhiyo,heerkooda waxbarashana kor loogu sii qaado, haseahaatee waxay ahayd mid ay hub ahaan u isticmaaleen, Istaraatiijiyad fogna ka lahaayeen oo ay ugu talo galeenin dhallinyarada Somaliland aanay helin waxbarashoiyo aqoon sare oo ay kula tartamaan kuwa da’dooda ah ee Soomaaliya.
Sannadihii u dambeeyey kacaankii Keligii Taliyahaahaa ee Siyaad Barre, way ka muuqatay tirada ardaydajaamacadda gasha ee ka kala socotay labadii dale e Is–raacay. Waxa kale oo ay ka muuqatay goobaha shaqoiyo kuwa maamul ha ahaadaan kuwo hoose, dhexe amasare ba. Istaraatiijiyadda hubkan halista ah ee looadeegsaday dhallinyaradeena oo qarsoonaa, u jeedadalaga lahaa waxay ahayd in aqoon iyo dhaqaale aanaysuurtogal ugu noqon inay ku yeeshaan wax muuqdadal.
Waxaan leeyahay taasi waa istaraatiijiyadii la lahaa eeaanay idinku waxba ka war hayn badankiinu, in kastookuwa xilligaa wax ka ogaa xaaladda jirtaa haddii ay dib u fikiraan dhab ahaan u ogaan karaan. Idinku se waxaad maanta arkaysaan in SoomaaliyaXukuumadeedu wax kasta oo nolol, horumar iyo wax tar u noqon kara Jamhuuriyadda Somaliland iyoshacbigeeda ay si badheedh ah ula dagaalamayaan, waxaanad ka war haysaan mashaariicda faro-ku–tiriskaah ee horumar muuqda ay ka dhalan karaan inay iskudeyayaan inay is hor taagaan, si aan looga fulin gudahadalka Somaliland. Waxaad arkaysaan colaadda ay u qaadaan dalalka aanay xidhiidh lahayn ama ay leeyihiinba marka ay Somaliland daneeyaan.
Carqaladaha waxbarasho, istaraatiijiyada ay ka lahaayeen haddii ay u fusho waxay xaaladda noloshadadka Somaliland noqon lahayd mid la mid ah ta ay maanta ku jiraan dadka madaw ee Maraykanku, taasookeentay in noloshooda iyo daryeelkooda oo liitaawgeed, sababna ay u tahay in dhaqaalahoodu aad u hooseeyo, taasina ay ka dhalato in difaac jidhkoodu uunoqdo mid aan tayo lahayn oo fayraska iska difaacikara. Waxaad arkaysaa in degmooyinka xaafadaha ay ku nool yihiin dadka madawga ah ee Maraykankuaanay u ogolayn inay kala fogaasho guryahagudahooda ama dibadoodaba sameeyaan.
ALLA MAHAD LEH, horaa loo yidhi; “sir ma-qabeAllaa u sahan ah” waa taa aan hayno maanta, kana muuqata dalka Jamhuuriyadda Somaliland, haseahaatee yeynaan noqonin in mar labaad la ina dago, dibna la innoogu celiyo dhibaatooyinka ay dadkeennumutaysteen muddadii 30-ka sanno ahayd ee ay Soomaaliya iyo Somaliland isku jireen, waana in aynumaanka ku wada haynaa hal-ku-dhegga ah; “muumingod laba jeer lagama wada qanniino.”
Previous articleThe Dangerous Item in the Agreement With Somalia
Next articleBerbera: nuxurka kulan dhexmaray Madaxda iyo Guddiyada Xaafadaha qaar
Save The Children Hay’ad Mudan Mahadcelinta Waxqabadkooda.